Randrianandrasana – Malag@sy Miray
Variana amin’ny tombon-tsoany loatra ny Mpitondra
Homa-miadan’ny toe-tsaina no anaran’aretina tena tandrify ilay fomba fihevitra mamohetra mitarika ny Malagasy hilomano mifanohitra amin’ny rian’ny fandrosoana tena izy. Tsy mihisatra fotsiny ny fampandrosoana mba imasoana fa tena toa hivily lalan-kafa mihitsy koa aza, noho io aretina io. Ny fanonontononana hoe: « Fampandrosoana, Fampandrosoana » mba ho entina mampandry adrisa fotsiny dia tena fanimbana ny fandavan-tena hiezaka ao anatin’ny olona izay tena manao ny ainy tsy ho zavatra sy mba misikim-ponitra hahatanteraka ny fampandrosoana tena izy. Tsy heverin’ireo manana andraikitra miharihary kokoa eo amin’ny firenena ireo fa ny fahatsiarovan’ny vahoaka hoe toa izy ihany no tena miharitra sy mandoa ny lany amin’ity fampandrosoana hiraina lava ity fa tsy mba ny mpitondra…
Randrianandrasana	Aucun commentaire
Ndeha ary hiresakafampandrosoana e!Samy mahay miresaka daholo rehefa mahazo ilay fitaovana idiransquowhawydny feo kendrena hanjary ho avo rehefa mikarantsana mivoaka aminsquowhawydilay vata fanamafisana iny, samy mailaka manoratra avokoa izay efa ampy fahazarana ka mahazo ilay fitaovana fitendry ho fandrafetana ny teny avy eo imolotra sy ny hevitra avy ao an-tsaina hanjary soratra azo vakiana eo aminsquowhawydny tava mazavansquowhawydny solosaina, eny, samy maneho hevitra daholo izay tonga eo aminsquowhawydny Blaogy, dia ity fafy hevitra an-tranonkalan-tserasera ity, tahaka izao anio izao. Saingy ity re no asa: mba misy mahay mampandroso tokoa ve? Fampandrosoana mantsy izao no resaka. Tsy fampandrosoana manao tifi-danitra anefa izany ambarako izany fa fampandrosoana tena mikendry ny fahavalo na…
Randrianandrasana	22 Commentaires